Tag: Macaamiisha | Martech Zone
Tani waa xayaysiis laga soo daabacay May 1916 ee Farsamoyaqaannada Caanka ah ee ka socda AT&T oo la hadlaya macaamiisha taleefanka. Waxaan badanaa isweydiiyaa sida ay u adkaatay in laga adkaado cabsida iyo gariirnaanta tiknoolajiyadda noocaas ahi ay tahay inay sababto waqtigaas. Waxaan sidoo kale la yaabanahay sida loo barbardhigo korsashada warbaahinta bulshada iyo internetka maanta. Taariikhdu had iyo jeer way soo noqnoqota. Telefoonadu, sida internetka oo kale, ayaa si weyn nolosha u beddelay. In 1926, Knights ee Columbus Guddiga Waxbarashada Dadka Waaweyn xitaa
Waxaad haysataa 30 ilbiriqsi si aad uqabsatid dareenka akhristayaashaada markay dhagsadaan emaylkaaga. Runtii kani waa daaqad yar. Hadaad aniga oo kale tahay, markaa waxaad u maleyn kartaa in animation-ka uu qatar yaryahay in loo isticmaalo suuqgeynta iimaylka, laakiin waxaad dooneysaa inaad soo jiidato dadka ku qaata dareenka. Marka, maxaad qabataa Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad dhex marto feejignaanta isbeddelka emaylka emaylka, tani waxay u noqon kartaa qalab la yaab leh suuq-geynta emaylka haddii si wax ku ool ah loogu daro. Kaliya maahan